Izvo mishonga yekurapa ye tamarind - Afrikhepri Fondation
China, january 21, 2021
Le tamarind inobatsira matumbu kufambisa uye inovandudza kugaya. Carminative uye inorwisa-kutapukira, inopindirawo mumatumbu mumatumbu sekubuda maruva, kubata kumeso uye kuora. Antiseptic, tamarind inonyaradza urinary kusagadzikana (kunyanya cystitis). Pamatambudziko ekufema, ayo anoshandiswa seanofungidzira kana paine bronchitis. Nekuda kweiyo antioxidants, inokurudzirwawo mukudzivirira kwekukwegura kwechitokisi.
Bactericidal, kuporesa uye kugadziriswa, tamarind inokurudzirwa kubata zvinetso zveganda zvakasiyana-siyana: maronda, zvirwere, dermatoses dzisina kufanira. Mu stomatology, inoderedza vanhu vanowanzoita zvirwere zvinokonzera kana gingivitis uye inobatsira panguva yekurovedza mazino echeche. Kushandisa zvakare kurapa maronda.
munyoro kupatira, kufema turakiti zvirwere, hosha huro, marwadzo muromo, ganda zvirwere (zvirwere ganda, maronda), conjunctivitis, kuzvimba mucous membranes, nefivhiri, manyoka uye biliary colic.
Zvimwe zviratidzo zvokurapa zvinoratidzwa
Tamarind juice inokurudzirwa kuti kuderedze kusuruvara uye kurutsa kwevakadzi vane pamuviri. Iyi simiti inozivikanwawo nekuda kwezvikomborero zvinokonzerwa nehuwandu hwemhepo uye asthenia.
Zvinokwanisika kuita mamwe maitiro ekugadzirira:
- Nokuda kwekuvhara kana yemiriwo yega, kuverenga 20 g yemaspire mune imwe litre yemvura.
- Decoction nokuda kwekushandisa kwekunze: kubika chidimbu chegark (+/- 15 cm) mu 1 l yemvura kwemaminitsi makumi matatu. Rega macerate kwemaawa maviri. Shandisa mumuromo wewaini kana pane ganda rinotsamwirwa, sevanopesana nehutachiona kana astringent. Mumashandisirwo emukati, iyi decoction inoshandiswa pakurwisana nehara (diarrhea) pachiyero chegirazi dze 2 zuva nezuva.
Kuchengetedza kwekushandisa tamarind
Izvo hazvina kunyanya kuchengetedzwa kwekushandiswa, kunze kwekuremekedza zvakaratidzwa zvirwere zvinoshandiswa. Zvisinei, zvinokurudzirwa kuzivisa chiremba wako kana mishonga kana mune mishonga pamwe chete. Yeuka, kunyange kutapira, tamarind ichiri chikafu. Mukuwedzera, kunyanyisa kushandiswa kwemasamarind kunogona kuita kuti matumbo ako ave nehanya nechechi ichi.
Izvo hapana zvinopesana. Kune rimwe divi, kune vakadzi vane nhumbu (kana kuyamwisa) vakadzi pamwe nevana, bvunza chiremba wako zano. Ingova nechokwadi chekutevera madosi anokurudzirwa.
Izvo zvakanyanya kuwedzerwa kuyerwa kana kuwedzerwa kunzwisisika kunogona kutungamirira kumatambudziko ekudzoka.
Rimwe jasi decoction kana tamarind juice rinoshandiswa kurapa hypotension uye jaundice.
Iyo decoction yakareba yebark inopedzwa kurapa chirwere cheshuga zvakasiyana nezvimwe zvehawani pods uye mapeji. Iyi decoction yemakwenzi inodhakwawo kuti isununguke mapomachache, jaundice uye diarrhea.
Chibereko chacho chinopedzwa uye chinoshandiswa kuita soro inonyatsozivikaniswa nekuda kwezvibereko zvayo.
Mishonga yekurapa uye kuwedzerwa
Izvozvo zvinoshandiswa zveCNUMX gramu dzemakungwa pamataundi emvura zvinokurudzirwa mukuchengetedza gastric ulcer. Muchiitiko ichi, inwa magirazi maviri pakati pekudya uye imwe musati marara.
A decoction ye 40 girasi yemashizha neawa imwe yemvura (yakanyanya) inoshandiswa kurapa matambudziko eropa uye jaundice kune vanhu vakuru.
Icho chinonzi antibacterial uye antioxidant.
Iyo mishonga inoshandiswa mukurapa kwekumbirwa, kuvhiringidza kwemakemikari uye rheumatism. Inofanira kudyora maGNUMX pagore rezera kubva pazera remakore 2 risina kupfuura 3 gramu.
Kushandiswa kwemaspp haina chepfu. Kunyange zvakadaro, mashizha akakurudzirwa uye mabhesi emvura haafaniri kudarika.
Organic Tamarind Concentrate 300g (Organic Tamarind) - Certified Organic, Yakakwirira Hunhu | ...
VITARMONYL - Sene Tamarin Transit Uye Digestive Nyaradzo. Anoshanda zvigadzirwa zvechisikigo mavambo - Yakagadzirwa mu ...
Natco Tamarind Concentrate Namatidza 300g - Natco Tamarind Concentrate Namatidza 300g
Tenga € 8,32
Yakapedzisira kugadziridzwa muna Ndira 21, 2021 7:18 PM
Mitemo Mind - Dan Millman (Audio)